Jonga iinkonzo zeSIM kunye nokusetyenziswa kwi-iPhone | Iindaba zeGajethi
Ufikelela njani kusetyenziso kunye neenkonzo ze-SIM SIM
Umbulali weviniga | | Iiselfowuni
Ukuba ifowuni oyithandayo yi-iPhone, kuya kufuneka uqonde ukuba isebenza nekhadi elincinci elibizwa ngokuba yiSIM; iqulethe ngaphakathi kuyo ulwazi oluthile oluthetha ngokubanzi ii -apps ezifakwe kumzi-mveliso okanye ngumnxeba osinike i-chip.
Kwifowuni ephathwayo ye-Android kukho ubukho beslot apho singena kule SIM khadi incinci, inemisebenzi efanayo nakweyiphi na enye imodeli kunye neqonga esinokuba nalo mzuzu (i-iPhone okanye iWindows Phone phakathi kwabanye); Kulungile, ukuba ucinga njalo Le SIM isetyenziselwa kuphela ukwenza umnxeba kulo naluphi na unxibelelwano okoko nje sinemali esele ikhona, masikuxelele ukuba uchanekile nangona ngokuqinisekileyo ngekhe ungazi, ungayenza njani le nto ngaphakathi kwesi SIM sincinci!
Ifektri efake usetyenziso kwi-iPhone SIM
Kwinqaku lanamhlanje siza kuhlalutya kuphela i-iPhone, oko kukuthi, into esinokuyibona kule SIM ukuba sifuna ukuphanda ngakumbi ngomxholo wayo; ngendlela ngokubanzi singatsho ukuba ngaphakathi kwekhadi elincinci kukho indawo ekuhlalwa kuyo zizicelo ezimbalwa ukuba zifakelwe umzi-mveliso njengoko kucetyisiwe ngasentla; Ezi zicelo zinakho ukulawula iinkonzo ezahlukeneyo ezineselfowuni (kule meko, i-iPhone), ebonisa ukuba:
Ibhalansi isetyenzisiwe kwaye enye isekhona.
Inani lemiyalezo yeSMS ethunyelweyo.
Kuxhomekeka kumnxibelelanisi wefowuni, ulwazi lunokucebisa ngeminye imiba embalwa, nangona ezi zikhankanywe ngentla zezona zibalulekileyo kwigama. Ngoku ukuba unqwenela Ngena ukukhangela umxholo wenye yezi SIM khadi Ukusuka kwi-iPhone, sicebisa ukuba ulandele la manyathelo alandelayo:
Layita i-iPhone yakho.
Lindela ukuba inkqubo yokusebenza igqibe ukusebenza.
Fumana kwaye ukhethe i icon Useto.
Ukusuka kwiwindow entsha khetha iqhosha «ifowuni«.
Ngoku siza kuya kwinxalenye yokugqibela yale festile.
Khangela ukuya kukhetho othi «IiSIM zokusebenza«.
Khetha olu khetho kwaye ucofe ku «Imenyu«
Ngamanyathelo esiwacebise apha ngasentla, kuya kubakho iindlela ezimbalwa esinokuphanda ngazo; nantso ke thaca iinkonzo ezohlukileyo esizenze ngesivumelwano, iindlela zokuhlawula kunye nokuhlawula phakathi kwezinye iindlela ezininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ufikelela njani kusetyenziso kunye neenkonzo ze-SIM SIM
Molo, andiboni khetho "Izicelo zeSIM" kwi-iOS 8.4. Ngaba uyazi ukuba kuphi ngoku? NgokukaVodafone -Ono iyafuneka ukuze kusebenze ukuzula kwi-terminal. Ndine-iPghone 4S kunye ne-5S kwaye akukho namnye kubo ovelayo.
Enkosi kakhulu ngolwazi. Ukwanga.
Molo, kwinguqulelo entsha 12.1.2 akusekho khetho "ngomnxeba" kodwa kuye ukhetho "idatha yeselula"
Enkosi, idatha elungileyo kakhulu.
Andiboni "usetyenziso lweSIM" kwi-iPhone 6
Ndingena njani koku ukuba ayibonakali?
Ukhetho "lweSipele" lusetyenziselwa ukubuyisela lonke ulwazi kwifowuni yam kwi-sim?
U-Helena Hoyos sitsho
Kwenzeka ntoni kum kukuba andikwazi ukufikelela kwimisebenzi ye-Sim, umzekelo: Ndiya kwi-mobile banking kwaye i-sim ibonakala, ndithumela umyalezo kwaye uthi linda kwaye akukho nto. Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuyilungisa?
Phendula u-Helena Hoyos
Ungasonyusa njani isantya sonxibelelwano lweWi-Fi neengcebiso ezisebenzayo
Uyonwabele njani iBrazil 2014 naphi na emhlabeni